कांग्रेस अधिवेशन: कास्कीमा काे-काे निर्वाचित भए ? - Globe Nepal
कांग्रेस अधिवेशन: कास्कीमा काे-काे निर्वाचित भए ?
ग्लोब नेपाल	शनिबार, ०४ मंसिर २०७८ गते ११:४३ मा प्रकाशित
पोखरा, ४ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत कास्कीका सबै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मत परिणाम अनुसार सबैजसो क्षेत्रमा प्यानलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।